बहादुरी देखाएबापत मुसालाई स्वर्ण पदक
प्रकाशित: मंगलबार, असोज १३, २०७७, १२:४०:०० एजेन्सी
मुसालाई स्वर्ण पदक! सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ। लुगा काटिदिने, जमिन प्वाल पारेर फोहोर गरिदिने र अनाज खाएर दिक्क बनाउने मुसा मार्न हाम्रो समाजमा कडा विषादीको प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तै ग्रामीण भेगमा अझै पनि मुसा मार्न बिरालो पाल्ने चलन छँदै छ।
तर यहाँ एउटा मुसाले बहादुरी देखाएबापत स्वर्ण पदक पाएको छ। बेलायतको एउटा च्यारिटी संस्थाले अफ्रिकी नस्लको मुसालाई स्वर्ण पदक दिएको हो।
कम्बोडियामा बारुदी सुरुङ हटाउने काममा सहयोग गरेको यो मुसालाई स्वर्ण पदक पाउने आफ्नो प्रजातिकै पहिलो मानिएको छ।
मागावा नाम दिइएको यो अफ्रिकी ‘ज्वाइन्ट पाउच्ड’ मुसा सात वर्षको छ। मागावाले सु्ँघेरै ३९ वटा बारुदी सुरुङ पत्ता लगाएको थियो। यसबाहेक उसले २८ वटा विस्फोट भइनसकेका बम पनि पत्ता लगाएको थियो। यो मुसालाई शुक्रबार बेलायतको च्यारिटी संस्था पीडीएसएले सम्मानित गरेको हो।
मागावाले दक्षिण पूर्व एसियाली देश कम्बोडियामा १५ लाख वर्गमिटर क्षेत्रलाई बारुदी सुरुङ मुक्त बनाउनमा मद्दत गरेको हो। यी बारुदी सुरुङ सन् १९७० र १९८० को दशकमा बनाइएका थिए जुनबेला कम्बोडिया बर्बर गृहयुद्धको चपेटामा थियो।
कम्बोडियाको माइन एक्सन सेन्टरका अनुसार अझै पनि ६० लाख वर्ग फिट क्षेत्रलाई बारुदी सुरुङमुक्त बनाउने काम बाँकी छ। यी बारुदी सुरुङका कारण सन् १९७९ देखि हालसम्म ६४ हजारको ज्यान गइसकेको छ भने २५ हजारभन्दा बढी अपांग भएका छन्।
मुसाले कसरी पत्ता लगाउँछ?
मुसालाई विस्फोटक रासायनिक पदार्थ पत्ता लगाउन र बाँकी अन्य धातुप्रति बेवास्ता गर्न विशेष तालिम दिइएको हुन्छ। तालिमप्राप्त मुसाले डिटेक्टर औजारले भन्दा पनि चाँडै बारुदी सुरुङ पत्ता लगाउन सक्छ। यसरी सुरुङ पत्ता लगायो भने उसले साथी मानिसलाई त्यसको संंकेत गर्छ। मुसालाई तालिम दिन करिब एक वर्ष लाग्छ।
मागावाको तौल १.२ किलो र लम्बाइ ७० सेन्टिमिटर छ। मुसाको तौल कम हुने हुँदा बारुदी सुरुङमाथि ऊ हिँड्दा सुरुङ विस्फोटको खतरा रहँदैन।
पीडीएसएका महानिर्देशक जेन म्याकलोगलिनले पत्रकार सम्मेलन गरी मागावाले बारुदी सुरुङबाट प्रभावित थुप्रै पुरुष, महिला र बालबालिकाको ज्यान जोगाउन सहयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्।
सात वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको मागावा अब रिटायरमेन्टको नजिक छ। क्यालिफोर्नियाको स्यान डिएगो चिडियाघरका अनुसार जाइन्ट अफ्रिकी पाउच्ड मुसाको औसत उमेर आठ वर्ष हुन्छ।
बालिकाको गोडा धोएर मात्र पढाउन थाल्छन् शिक्षक भैयालाल
कोरोनाको डरले तीन महिनासम्म विमानस्थलमै बास
एक खुट्टाको बलमा प्रेरणाको स्रोत बनेकी चिनियाँ बडी बिल्डर
अन्तरिक्षमा पनि मदिरा पार्टी
एउटै बोटमा दुई घरी केरा !
‘मोदी’ नाम गरेको भेडाको मूल्य एक करोड पाँच लाख
शाकाहारी हुनु वास्तवमै राम्रो हो ?
जहाँ विश्वको सबैभन्दा ठूलो बारुदी सुरूङ छ
५५ वर्षका सलमान : रोमान्स र एक्सनबीच गज्जबको सन्तुलन
पोर्न फिल्मलाई ब्लू फिल्म किन भनिएको होला ?
१ तानाशाहहरू ढल्नुअघि नागरिकलाई हेप्छन् अनि आफैं सकिन्छन् : गगन थापा
२ बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट तेस्रो जनआन्दोलन घोषणा
३ पोखरामा प्रथम टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता हुने
४ तनहुँमा २० हजार मतदाता थप
५ नेकपा दाहाल–नेपाल समूहद्वारा बालुवाटारमा भएको दमनको विरोध
स्विट्जरल्यान्डबाट पूर्वडीआईजी ठकुरीलाई आएको रकम थाहै नदिई फिर्ता
ओली र नेकपा संकटको विस्तारित संक्रमणमा फस्दै मुलुक
यसरी लगाइँदैछ कोरोनाको खोप, ज्यान गए सरकार जिम्मेवार नहुने
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले माइनस १४ डिग्री तापक्रम भएको पानीमा किन लगाए डुबुल्की ?
सत्ताप्राप्ति र राज्य दोहनमा बितेको एक युग
डा. सूर्यराज आचार्य
कस्तो होला अब नेपाली राजनीतिको यात्रा ?
गाउँगाउँमा साथीहरू चुनावमा जान उत्साहित छन् (अन्तर्वार्ता)
हामी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्षम छौं : केदार कार्की (अन्तर्वार्ता)
प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन तयार छौं, केन्द्रको निर्णय कुर्दैनौं (अन्तर्वार्ता)